Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2009 March 07
07 Marsa 2009
Tantara tamin'ny 07 Marsa 2009
Morocco: namoaka ny sangan’asa voalohany ny mpanoratra Morokan-Amerikana
Maraoka07 Marsa 2009
Efa ho taona vitsivitsy izay no nanoratany ny bokiny voalohany, vokatra azo avy amina fanakambanan tantara mitondra ny lohateny hoe Hope and Other Dangerous Pursuits (Fanantenana sy ny Fanenjehana hafa atahorana), no navoaka. Tafiditra tao anatin’ny mpanoratra fanta-daza ao Morocco I Laila Lalami. Rehefa voadika tamin’ny teny Anglisy ny asa...
Amerika Avaratra07 Marsa 2009
Niova hanaraka ny fivavahana jiosy i Lindsay Lohan no malaza ao Isiraely.Voalazany ao anatin’ny pejy Facebook-ny manokana hoe nanantena izy fa ny fiovany dia hitondra azy hanakaiky bebe kokoa ny namany jiosy, antsoina hoe Samantha Ronson. Ankehitriny dia ao Londres I Lohan sy Ronson manatrika ny fotoampivavaham-pianakaviana jiosy, mitzvah. Image...
Kosta Rika: Mety hanimba ny hetahetan'ny ho filoha ny risorison’I Calderon
Amerika Latina07 Marsa 2009
Miditra fitsarana ankehitriny ny filoha Kosta Rikana teo aloha Rafael Angel Calderon fournier mahakasika ny fanenjehana azy tamin'ny fividianana fitaovam-panafody ho an'ny sampan-draharahan'ny fahasalamana. Efa tany amponja izy nohon'ny enjika natao taminy mahakasika ny fifandraisany tamina fividianana fanana tsy mari-pototra. Mety hampihena ny fanantenany hilatsaka ho fidiana ho amin'ny fifidianana...
Korea: Fihaonana voalohany, ahoana no ahalalanao ny ho sakaizanao anatin’ny 10 minitra.
Korea Atsimo07 Marsa 2009
Amin’ny fomba ahoana no mety ahitanao ilay lehilahy sahaza anao haingana indrindra? Tsinjoko fa mizara famakafakana ara-pomba-piaina (psychologique) mahavariana ireo mpamaham-bolongana izay milaza manao hoe amin’ny fomba ahoana no ahafahanao mamaky ny toetran’ny maha izy azy ny olona sy ny endriky ny toetra ananan’ny lehilahy miaraka aminao, na amin’ny fomba...